Saturday, 07 July 2018 19:46
Saturday, 07 July 2018 19:43
Sassaabbiin galii gibiraa bara 2011 boru eegala
Sassaabbiin galii gibiraa bara bajataa 2011 Adoolessa 1 irraa eegalee kan itti fufu ta'uu Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa beeksise.
Daariktarri ittaanaan abbaa taayitichaa Obbo Girmaa Daadhii ibsa dheengadda Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, sassaabbiin galii gibiraa bara bajataa 2011 Adoolessa 1 irraa jalqabee kan itti fufu ta'a. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa 'C' Adoolessa 1 hanga Qaammee 5 bara 2010tti kaffaltii gibiraa kan raawwatan yoo ta'u, kaffaltoonni gibiraa sadarkaa 'B' fi 'A' ammoo Fulbaana bara 2011 irraa eegalanii kan raawwatan ta'uu himaniiru.
Gibira yeroon kaffaluun adabbii jalaa kan nama baasuufi galiin mootummaa yeroodhaan akka sassaabamu taasisa kan jedhan Obbo Girmaan, kaffaltoonni gibiraa yeroodhaan raawwachuu akka qaban yaadachiisaniiru.
Abbaan taayitichaa bara bajataa 2011 galii idileetiin qarshii biliyoona 15, galii mana qopheessaatiin qarshii biliyoona 3.4 waliigalatti qarshii biliyoona 18.4 sassaabuudhaaf karoorfachuusaa himaniiru.
Bara 2010 galii idileetiin qarshii biliyoona 13.2 walitti qabuuf kan karoorse yoo ta'u, raawwiinsaa qarshii biliyoona 13.3 ta'eera. Galii mana qopheessaatiin qarshii biliyoona 2.9 walitti qabuuf karoorfachuun hanga kaleessaatti qarshii biliyoona 2.8 walitti qabuun kan danda'ame ta'uu ibsaniiru.
Daltdaltoota seeraan ala socho'uun gibira mootummaa waliin dhahaniifi dhoksan, akkasumas gibira yeroodhaan hinkaffalleefi adabbii itti murtaa'e kaffaluu didanirratti hojiin hordoffii taasifamaa tureera. Kanaanis qarshii miliyoona 200 walitti qabuun danda'ameera kan jedhan Obbo Girmaan, hojiin kun fuulduraattis cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru.
Komii tilmaammii gibiraa irratti uumame furuudhaaf qajeelfamni kaffaltii gibiraa akka fooyya'u ta'eera jedhanii, koreen komii uumamuu danda'u furus hundaa'eeraa jedhaniiru.
Bara bajataa 2011 tilmaamni gibiraa haaraan kan hinjirre ta'uufi haalli komii kaffaltoota gibiraa ittiin furamus kan duraaniirra fooyya'aa ta'uu himaniiru.
Saturday, 07 July 2018 19:40
Saturday, 07 July 2018 19:36
8028: Toora bilbila tolaa qonna ceessisaa jiru
Obbo Darrasee Daawit, qonnaan bulaa Naannoo Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Kibbaarraa yeroo hedduu toora bilbila tolaa 8028 irratti bilbiluudhaan tajaajila gorsa qonnaa argachuun badhaafaman keessaa isaan tokko.
Qonnaan bulaan kun sagantaa marii paanaalii Kibxata darbe galma Barkumee Finfinneetti geggeeffamerratti akka Gaazexaa Bariisaatti himanitti, yeroo hedduu toora bilbila tolaa 8028 irratti bilbiluudhaan dhimma qonnaa irratti gorsaafi odeeffannoo salphaatti argachaa jiru. Qonnaan bultoonni naannawaa isaanii hedduun garuuu toora bilbila tolaa kanatti fayyadamuun gorsaafi odeeffannoo barbaachisaa argachaa kan hinjirre ta'uu dubbatu.
Obbo Xaayir Shuugoos Naannoo Oromiyaa, Godina Arsii Lixaa, Aanaa Gadab Asaasaatti ogeessota toora bilbila tolaa 8028 irratti irra deddeebiidhaan bilbiluun badhaafamaniiru. Akka isaan jedhanitti, qonaan bulaan toora bilbila tolaa kanarraa tajaajila gorsa qonnaa argachuun faayidaa guddaa argachaa jira. Sagantaan kun qophii maasaa qopheessuu irraa hangaa sassaabbii omishaatti tajaajila gorsaa kan kennu yoo ta'u, tajaajilli kun yeroo gababaa keessattii qonnaan bulaa mara bira kan ga'uu danda'u waan ta'eef, bu'a qabeessa. Qonnaan bultoonni sagantaa kanatti fayyadamanis jijjiirama argisiisaa akka jiranidha kan himan.
Ministir De'eetaa Damee Misoomaa Qonnaa Ministeera Qonnaafi Qabeenyaa Beeyiladaa Doktar Iyyaasuu Abrahaa akka jedhanitti, qonnaa ceesisuu keessaa wiirtuun tajaajila gorsa qonnaa sarara tolaa 8028 gumaacha olaanaa argarsiisaa jira.
Gaaffii qonnaan bultootaa sadarkaan jirus deebisaa jira. Kana malees muuxannoowwan gaggarii hojiirra oolchuu, bakka weerarri dhukkubootaa midhaanii mudatutti ergaa gabaabaa erguudhaan ofeeggannoofi akeekkachiisa kennuun hojii omisha qonnaa fooyyessuu keessatti gumaacha olaanaa kan qabu ta'uu himu.
Hoji gaggeessaan Ejensii Ce'umsa Qonnaa Itoophiyaa, Doktar Kaaliid Bombaa maricharratti akka jedhanitti, ejensichi ittifayyadama teknolojiiwwan qonnaarratti gama 8028tiin qonnaan bulaaf odeeffannoo wayitaawaafi gorsa barbaachisu akka argatan taasisaa jiraachuu dubbatu.
Akka ragaan ejensicharraa argame mul'isutti, bara 2007 erga wiirtuun gorsa qonnaa toora bilbila tolaa 8028 hundeeffamee as wiirtichi bilbila miliyoona 30 kan keessumsiiseefi lakkoofsi bilbilaa miliyoona 3.6 galmaa'eera.
Saturday, 07 July 2018 19:33
Saturday, 07 July 2018 19:21
Saturday, 07 July 2018 19:19
Gaggeessitootni amantii waliigalteedhaan hojjechuu qabu jedhame
Doktar Abiyyiifi koree fala barbaadduu hawaasa Musliimaa
Manni Maree Dhimmoota Islaamummaafi Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Musliimaa marti karaa nagaatiin waliin hojjechuu akka qaban Ministirri Muummee Mootummaa RFDI Doktar Abiyyi Ahmad ibsan.
Ministirri muummeen kana kan ibsan Roobii darbe wayita waajjirasaaniitti gaggeessitoota amantii Islaamaa waliin mari’atanitti yoo ta’u, walitti bu’iinsota Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaafi Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Musliimaa gidduu jiran furuuf koreen waliiniis hundaa’eera.
Doktar Abiyyi Ahmad waltajjii marichaarratti hubannoo kennaniin akka jedhanitti, qaamoleen lameenuu dhimmoota isaanii karaa nagaafi akkaataa barsiisa Islaamaatiin rakkoolee mudatan furuu qabu. Mootummaan dhimma amantii keessa waan hinseenneef, hindeggaru; hinmormus jechuun hubachiisaniiru. Kanaafis qaamoleen lameen walta’anii hojjennaan biyyasaaniifi lammiilee rakkataniif furmaata ta’uu danda’uu jedhaniiru.
Koreen waliinii qaamolee lameen gidduutti nageenya buusuuf hundaa’es gaaffiilee hawaasa Musliimaatiif furmaata waaraa fiduuf imaanaa kennameef akka bahatan abdiin qaba jedhaniiru.
Gaggeessitootni amantii kamuu waliigalteedhaan hojjechuu qabu jedhanii, garaagarummaa jiru ammoo mariidhaan hiikuun fala ta’uus yaadachiisaniiru.
Walittiqabaan koree waliinii Haji Umar Idiriis yaada kennaniin, gaaffiilee hawaasni Musliimaa kaasaa tureefi jiru deebisuuf qindoominaan hojjetanii jijjiirama barbaadamu kan fidan ta’uu dubbataniiru. Koreen hundaa’es ittigaafatamummaa guddaa kan qabu waan ta’eef, kana ammoo kutannoon ni hojjennaa jedhaniiru.
Pirezidaantiin Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheh Mahammad Amiin Jamaal gamasaaniin akka jedhanitti, koreen waliinii hundaa’e rakkoolee kanaan dura turan sirreessuun gaaffiileen hawaasa Musliimaa akka deebi’an gochuu keessatti gahee guddaa qabaa jedhaniiru. Garaagarummaa jiranis mariidhaan akka furaman gochuufi kallattii kaa’uun, akkasumas dadammaqiinsa hafuuraafi hojiilee misoomaa hordoftootni amantichaa barbaadan cimsuuf qooda olaanaa qabaachuusaa eeraniiru. Tattaaffii Doktar Abiyyi Ahmad taasisaniifis galata qaban ibsaniiru.
Koreen waliinii hundaa’es miseensota sagal kan qabu yoo ta’u, hawaasni Musliimaa marti garaagarummaa qaban dhiphisuun walta’insaan Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa cimaa akka ijaaraniif kan hojjetuudha.
Gama biraatiin Doktar Abiyyii Ahamad lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa Kaabaa keessa jiraatan waliin marii’achuuf karoorri qabamuusaa Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa beeksise.
Kanaanis waltajjichi Adoolessa 21fi 22 bara 2010 Magaalaa Waashingitaniifi Loosaanjilasitti mataduree, “Masaraa jibbiinsaa diiguun riqicha jaalalaa ni ijaarra” jedhuun kan adeemsifamu ta’uun ibsameera.
Ministir De’eetaa Ministeera Dhimma Alaafi walitti qabduun yeroo koree waltajjii daaw'annichaa Ambaasaaddar Birtukaan Ayyaanoo akka ibsanitti, waltajjii marichaarratti lammiileen Itoophiyaa kamuu gosaan, amantiin, siyaasaafi afaaniin osoo walhinqoodiin ni hirmaatu.
Kaayyoon waltajjichaas gaaffiilee kanaan dura lammiilee biyyattii biyya alaa jiraataniin ka’aa turaniif deebii kennuuf, akkasumas kallattii biyyattiin hordofuu qabdu eeruuf ta’uu himaniiru.
Kanuma waliinis waggoota digdamii shaniif waldhabdee abbootii amantii Ortodoksii Itoophiyaa gidduu ture furuuf koree jaarsolii biyyaa waliin ta'uun kan araarsan ta'uu beekameera.
Koreen waltajjicha qindeessus Itoophiyaafi Ameerikaa keessatti qophii gahaa godheeras jedhaniiru.
Saturday, 07 July 2018 19:17
Taphni yunivarsiitiiwwan guutuu Afrikaa xumurame
Waggaa lama lamaan kan adeemsifamu taphni yunivarsiitiiwwan guutuu Afrikaa magaala Maqaleetti guyyoota shaniif adeemsifamaa ture kaleessa xumurame.
Taphiwwan guutuu yunivarsiiwwan Afrikaa kun ALA bara 1974 irraa kaasee kan jalaqabe yoo ta’u, kan baranaa dabalatee yeroo 9faf naannoo Tigiraayi magaalaa Maqaleetti gaggeeffamaa tureera.
Sababiin shaampiyoonaan kun itti geggeeffamuuf taphawwan guutuu yunivarsitiiwwan addunyaa bara 2018 Chaayinaatti geggeeffamurratti yunivarsiitiiwwan shaampiyoonaa ta'an Afrikaa bakka bu'anii akka hirmaatan gochuufi.
Walmorkiiwwan hanga ammaatti adeemsifameen Itoophiyaa dabalatee yunivarsiitiiwwan shantamii torba biyyoota Afrikaa 18 irraa baba’anakaakuuwwan ispoortii 10fi ispoortessitootni 980 hirmaachaa jiru.
Shaampiyoonaan kun Dilbata darbe kan eegalame yoo ta’u, har’a akaakuuwwan ispoortii addaddaa gaggeessuun kan xumuramu ta’uun hubatameera.
Itoophiyaarraa yunivarsiitiiwwan 11 kan hirmaatan yoo ta’u, biyyootni Afrikaa kanneen akka Naayijeeriyaa, Naamibiyaa, Zaambiyaa, Botiswaanaa, Seeraaliyoon, Ugaandaa, Senegaal, Kaameruun, Beeniin, Giinii Bisaawu, Afrikaa Kibbaa, Moorishesiifi Madagaaskaar hirmaataniiru.
Shaampiyoonichi adeemsifamaa kan jiru gosoota ispoortii kanneen akka kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, kubbaa harkaa, kubbaa kachoo, baadimantan, tenisa miinjalaa, atileetiksii, cheeziifi tekuwaandootinidha.
Taphiwwan hanga ammaatti adeemsifaman yoo ilaalamu dorgommii cheeziitiin dhiirotaan Yunivarsiitiin Finfinnee 1fa, Arbaa Minci 2fafi Yunivarsiitiin Maqalee 3fa bahaniiru. Dorgommii baadimantaniitti, dubaraan Yunivarsiitiin Kiristaan(kan Ugaandaa)fi Yunivarsiitiin Maqalee 1fafi 2fa yoo bahan, dhiiraan ammoo Yunivarsiitiin Seengaan(kan Gaanaa), Yunivarsiitiin Kiristaaniifi Yunivarsiitiin Moorishes tokkoffaadhaa hanga sadaffaa bahuun mo’ataniiru.
Fiigicha meetira kuma kudhaniin har’a dhiirota gidduutti adeemsifameen atileeti Suraaf Jamsi Yunivarsiitii Kiristaanirraa (Ugaandaa), Daani’eel Dooyyoo Yunivarsiitii Finfinneerraa, akkasumas Saadik Baatii Yunivarsiitii Kiristaanirraa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniiru.
Shaampiyoonaan tapha yunivarsiitiiwwan guutuu Afrikaa kun waggaa lamatti al tokko kan adeemsifamu ta’uyyuu sagantaansaa addaan ciccitaa ta’uu hubachuun danda’ameera. Itoophiyaan barana yeroo jalqabaaf kan hirmaatte yoo ta’u, kan qopheessites baranuma ta’uusaallee beekameera.
Sababiin shaampiyoonaan kun itti geggeeffamuuf taphawwan guutuu yunivarsitiiwwan addunyaa bara 2018 Chaayinaatti geggeeffamurratti dargaggoota ykn yunivarsitoota shaampiyoonaa ta'an Afrikaa bakka bu'anii akka hirmaataniifi.
Saturday, 07 July 2018 19:13
Saturday, 07 July 2018 19:08
Pirojektii kaafamtoota misoomaa
Qonnaan bulaan naannawa Finfinnee jiraatu yeroowwan dheeraaf sababa misoomaatiif qe'eesaarraa buqqa'aafi dhiibamaa tureera.
Yeroo q'eesaarraa buqqa'utti kanfaltiin madaalamaan kennamuufii dhabuudhaan waggoota muraasaan booda lafa dura gurguraterratti gamoo ijaarameef waardiyyaa ta'uuf dirqamaa ture.
Sababa kanaanis rakkoolee hawaas dinagdee hedduuf saaxilamaa kan ture yemmuu ta'u, yeroo dhihoon booda immoo qonnaan bultoota naannawa magaalattiitti misoomaaf kaafaman deebisanii dhaabuuf sochiin taasifamaa jira.
Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti namoota sababa misoomaatiif kaafaman fayyadamoo taasisuuf pirojektii haaraa eegaluusaa bulchiinsi magaalatti ni ibsa.
Pirojektichi abbootii warraa misoomaaf kaafaman kuma shan fayyadamoo kan taasisu yemmuu ta'u, kunis komii kanaan dura ture hanga tokko ni fura jedhamee abdatama.
Bulchiinsi magaalichaa lakkoofsa kaafamtootaa adda baasuudhaan deebisee dhaabuuf qorannoo yeroo dheeraa fudhate taasisaa turuu kan himan kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee, Obbo Dirribaa Kumaa, bu'aa qorannichaarratti hundaa'uudhaanis sadarkaa sadarkaadhaan hojiin kaafamtoota misoomaa kanneen fayyadamaa taasisu kan hojjatamu ta'uu dubbatu.
Komii kaafamtoota misoomaatiin walqabatee ka'aa ture hundeedhaa furuufis ta'e pirojektotni isaan fayyaduu danda'u bal'inaan akka hojjatuuf qaamni ykn waajjirri of danda'e hundeeffamuusaas ni ibsu.
Akka ibsa Obbo Dirribaatti; waggoota 26n darban qofa keessatti sababa misooma naannawa magaalichaatiin walqabateen abbootiin warraa kumni jahaafi 553 iddoo dura turanirraa kan kaafaman yemmuu ta'u, lakkoofsi kunis maatiidhaan kuma 32 ta'a.
Ummata sababa misoomaatiin kaafame kana fayyadamaa taasisuus projektiiwwan gara garaa qophaa'aa turan keessaa immoo; pirojektii horsiisa lukkuu, furdisa loonii, misooma hoortii kaalcharii, daldala xixiqqaafi gamoowwan ijaaruun kireessanii fayyadamoo akka ta'aniif gargaaruuf dhakaan bu'uuraa Pirezdaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Lammaa Magarsaafi Obbo Dirribaa Kumaatiin kaa'ameera.
Naannawa Galaanittis maatii qonnaan bultootaa misoomaaf kaafaman fayyadamoo taasisuuf ijaarsi aagroo indaastirii baatii saditti xumuramee hojiitti galu kan ijaaramu yemmuu ta'u, kanaanis rakkoon maatii kaafamtootaa dhiheenyatti ni fayyada jedhamee eeggama.
Kaafamtoota misoomaa kanneen fayyadamtummaa diinagdeetiin ala ijaarsa bu'uuraalee misoomaatiif qarshii miiliyoonni 420 ta'u ramadameera.
Pirojektichaan furdisni horii lafa heektaara 65 irratti, wiirtuuleen horsiisa lukkuu shan, wiirtuuwwan gabaa shan kan hammatame yemmuu ta'uu, dabalataanis oolmaan daa'immanii shaniifi manneen barnootaa shanis pirjeektichaan hammatamaniiru.
Bulchiinsi magaalichaa qarshii miiliyoona 52 ramaduun qonnaan bultoota 2087f deeggarsa midhaan nyaataafi kanneen biroo kennaa jiraachuus Obbo Dirribaan ni ibsu.
Kaafamtoota misoomaa keessaa maatiin qonnaan bultoota hojjechuu danda'anii 1, 752 qarshii miiliyoona sagalii oliin gurmaa'anii hojjechaa kan jiran ta'uufi kanaanis qarshiin miiliyoona sadii qusachuusaanii ibsu.
Kaafamtoota misoomaa kanneeniif deeggarsa maallaqaa qofa osoo hintaane dhaabbiidhaan akka of danda'aniif yeroo ittaanuttis namoota 5,997f leenjii ogummaa garaa garaa kennuudhaan gara hojiitti galchuuf hojjatamaa jira.
Misooma waggoota kurnan lamaan darbanitti naannawa magaalattiitti babal'achaa turan investaroota gammachiisaafi qonnaan bultoota immoo boochisaa turuunsaa ni yaadatama. Haala kana jijjiiruun immoo dhimma filannoo hinqabne ta'uusaatiin jalqabbiin jiru jajjabeessaadha.
Walumaagalatti, misoomni kamiyyuu isa tokkoof gammachuu kaaniif immoo gadda ta'uu hinqabu. Qonnaan bulaa lafa abbaasaa irraa sababa misoomaatiif yeroowwan adda addaatti kaafamaa ture deebisanii dhaabuun mirga osoo hinta'in dirqama mootummaa ta'uu qaba.
Torban kana/This_Week 4952
Guyyaa mara/All_Days 1642547